Fambolen-kazo: namita ny adidiny ny Airtel | NewsMada
Fambolen-kazo: namita ny adidiny ny Airtel
Par Taratra sur 21/03/2020
Toy ny fandraisana andraikitra ataon’ny orinasa sy ny sampandraharaha maro, nanao fambolen-kazo koa ny Airtel Madagascar, ny 14 febroary teo teny Ankazomalaza. Karazan-kazo acacias 1 000 ny nomen’ny governemanta nambolen’ireo mpiasan’ny Airtel Madagascar. Nisy 150 izy ireo nandray anjara amin’izany asa fampandrosoana maharitra eto amin’ny firenena izany. Ho fampandrosoana ny firenena araka ny teny fanamby “Ho rakotra ala i Madagasikara”.
« … Avy amin’izao fambolen-kazo ataonay izao no hanomezanay tontolo iainana madio ho an’ny taranaka hoavy. Fandraisana anjara amin’ny adidy eto anivon’ny fiarahamonina izany fahavononana fandraisana andraikitry ny Airtel izany », hoy ny tale jeneraly, i Eddy Kapuku.
Efa namaly ny fanasana nataon’ny Fikambanana Fiova any Antsirabe (Ambatolahy Vinaninkarena), faritra Matsiatra Ambony, sy Ihorombe (Fianarantsoa) koa ny Airtel. Nandray anjara avokoa ireo mpiasan’ny Airtel any amin’ireo toerana ireo. Fanehoana finiavana sy firaisankina amin’ny mpiray tanindrazana daholo izany. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ity orinasa ity. Tsiahivana fa efa hatramin’ny taona maro nanaovan’ny Airtel izao hetsika izao.